Tag: wideo | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 30, 2017 Alarobia, Martsa 10, 2021 Douglas Karr
Mikaroka, manoratra ary mamokatra horonantsary mihetsika ho an'ny mpanjifanay izahay ary dingana sarotra be io. Na dia manana tambin-karama tsy mampino aza izy ireo, orinasa maro no tsy mahazaka fandaniana dolara an'arivony amin'ny sary mihetsika mahafinaritra. Wideo.co dia namorona sehatra famoronana horonan-tsary an-tserasera an-tserasera hanome vahaolana mora vidy eo anelanelany. Azonao atao ny mizaha toetra ny sehatra, amin'ny fanaovana horonan-tsary mihetsika maimaim-poana miaraka amin'ny maodely omen'izy ireo. Ny modely dia misy ny fandraharahana, fankalazana, fampisehoana,